Tag: nhoroondo | Martech Zone
Chitatu, June 10, 2015 Douglas Karr
Flipbooks ndeimwe yemafomu ekutanga ezve nhasi anonzi seyakabatanidzwa multimedia uye yaive nepamutemo muUnited States muna 1882! Tumira Flippies vhidhiyo uye logo, uye ivo vanozobatsira kugadzira yekudyidzana yehunyanzvi iyo yavanodaidza kuti gumbo-inowaniswa kushambadzira. Minimum odhiyo ndeye 2,500 mafiripi mabhuku - asi ndeipi nzira iri nani yekuratidza chako chigadzirwa, sevhisi kana brand. Flipbook inogadzira makuru anofambidzana mabrochure chiitiko chakapihwa kana vekutengesa showaawaways. Kunyangwe iri
Ini ndinoda kushambadzira uye zvese zvinomiririra. Mune mawonero angu, kushambadzira kwakakosha nekuti kunounza pamwechete matarenda mazhinji uye zvinhu: Hunhu hwevanhu - kufanotaura maitiro evanhu uye kunzwisisa zvavanoda uye zvavanoda zvinotyaira hunhu ihwohwo. Kugadzira - kuuya nemazano matsva ari nyore uye akanaka, achigadzirisa kukoshesa kwevanhu kweaesthetics. Kuongorora - kuongorora matombo e data kuti uwane mikana yekuvandudza uye kuwedzera mhinduro. Tekinoroji - kushandisa
Gore rino pakave nekuputika chaiko muindasitiri yekushandisa otomatiki. Iko kushambadzira otomatiki masisitimu aishandiswa kungokwanisika kune bhizimusi hombe, kwaida zviwanikwa zvakawanda kushandisa uye kugadzirisa, uye zvaive zvakaoma kushandisa… yanhasi kushambadzira otomatiki masystem ari nyore, anoyevedza, uye akagadziridzwa kumakambani makuru uye madiki. Vedu veKushambadzira Automation vanotsigira kuRight On Interactive vanga vachitibatsira kuti tinzwisise indasitiri, mabhenefiti uye neshanduko dzinoshamisa dziri kuitika.
Nhoroondo Yekushungurudza Technologies Mukushambadzira
Chipiri, January 17, 2012 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Sezvo masvikiro ekutaurirana akachinja uye matekinoroji matsva akaumbwa, ivo vakadonhedza maindasitiri mazhinji uye vakaputika matsva kuti vatsive. Iyi infographic, yakagadzirwa mukudyidzana pakati peEloqua naJess3, inotifambisa kuburikidza nenhoroondo uye nezviitiko zvakawanda zvakakonzera shanduko yevatengesi. Nhoroondo Yekushungurudza Kugadziridza muB2B Kushambadzira inotarisa budiriro matekinoroji nemaitiro akachinja zvachose chikamu chimwe chenyika: hupenyu hwevashandi vekutengesa veB2B. Ongororo
Nzira Dzinokurumidza uye Dziri Nyore Kupfuura Yako Saiti
Chipiri, August 30, 2011 Svondo, Ndira 19, 2014 Douglas Karr
Kuburikidza nemupi wedu wekutambira, ini ndakaziviswa kuCloudFlare. Ini ndakakatyamadzwa chose chose nebasa ... kunyanya mutengo wekutanga (mahara). Pandaishandira mukuru SaaS Provider, isu takagadzira geocaching masevhisi uye zvakatibhadharira makumi ezviuru zvemadhora pamwedzi. CloudFlare haina kuvakirwa SaaS Provider, asi yakakwana kune yako webhusaiti kana blog. CloudFlare ibasa rinoshandisa tekinoroji yekutengesa kuita kuti mawebhusaiti amhanye akachengeteka uye nekukurumidza kutenderera